के बालबालिकालाई पनि मिर्गौला रोग लाग्छ? अभिभावकले के कुरामा ध्यान दिने? :: डा विवेक तोदी :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
विश्व_मिर्गौला_दिवस के बालबालिकालाई पनि मिर्गौला रोग लाग्छ? अभिभावकले के कुरामा ध्यान दिने?
डा विवेक तोदी बिहीबार, फागुन २६, २०७८, ०८:०९:००
मिर्गौलाको रोग भनेको ‘साइलेन्ट’ रोग हो। यसका लक्षण हत्तपत्त देखिँदैन। तर, जब देखिन्छ त्यो बेला ढिला भइसकेको हुन सक्छ। बालबालिकाहरुमा पटक–पटक पिसाबको संक्रमण देखिन्छ भने त्यो मिर्गौलाको समस्या हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यस्ता कुरामा अभिभावक सचेत हुनुपर्छ। पिसाबको संक्रमणको शंका लागेपछि अभिभावकले तत्कालै स्वास्थ्य संस्थामा लगेर उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। यस्तो संक्रमणको समयमै उचित उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ। बच्चामा पिसाबको संक्रमण विभिन्न कारणले हुन सक्छ। सामान्यतया बालिकाको तुलनामा बालकलाई पिसाबको संक्रमण कम हुन्छ। तर, बालकमा पिसाबको संक्रमण देखियो भने त्यसले मिर्गौलामा समस्या निम्त्याएको हुन सक्छ।
यस्तै, बालिकाहरुमा भने मुत्रद्वार र गुद्वारको सरसफाइ नहुँदा संक्रमण हुने गर्छ। बालिकाहरुलाई अभिभावकले पानीले दिसा सफा गर्दा पछाडिबाट अगाडि हात ल्याएर धुनु हुँदैन। यसो गर्दा पिसाबको संक्रमण हुने खतरा रहन्छ। त्यसकारण अगाडिबाट पछाडि हात लगेर दिसा धोइदिनुपर्छ। त्यसपछि पनि सफा कपडाले पुछिदिने गर्नपर्छ।
यसका साथै मिर्गौलाको बनावट, पिसाब नली, पिसाब थैलीको समस्याले पनि बालिकाहरुमा संक्रमण देखिन्छ।
बालबालिकामा पिसाबको संक्रमण पटक–पटक देखिए पनि एन्टिबायोटिक वा अन्य सामान्य उपचार गरेर क्षणिक रुपमा निको पार्ने गरिन्छ। तर, उक्त संक्रमण किन दोहोरिरहेको छ? भनेर थप जाँच गरिँदैन। फलस्वरुप कालान्तरमा त्यसले मिर्गौलामा गम्भीर असर गर्ने खतरा रहन्छ। यस्ता समस्यालाई सामान्य ठानेर चुप लागेर बस्नु भनेको हाम्रा नानीबाबुहरुलाई मिर्गौला रोगको गम्भीर अवस्थामा धकेल्नु हो। यो कुरालाई अभिभावकले बढी ध्यान दिन जरुरी हुन्छ।
बालबालिकाहरुमा जन्मजात मिर्गौलाको समस्या पनि आउने हुन्छ। कतिपयमा जन्मदा नै मिर्गौला अन्यत्र स्थानमा हुने, एउटा मात्र हुने, नली सुन्निने, पिसाब थैलीमा समस्या हुने पनि हुन्छ। केही बालबालिकामा भने जन्मेको केही समयपछि पत्थरी हुने र मिर्गौला बिग्रने समस्या पनि देखिएको छ। यस्ता समस्याको समयमै पहिचान गरी उपचारमा जानुपर्ने हुन्छ। बालबालिकाको मिर्गौलामा हुने सबै रोग तथा समस्याको नेपालमा उपचार सम्भव छ।